ISICELO | - Xuzhou Caixin Aluminium Iimveliso Co., Ltd.
Ukusetyenziswa okubanzi kweemveliso zealuminium yeCaixin
Njenge sithuthi sokwakha umsebenzi onzima weXCMG Group, ibisoloko ingumxube wealuminium oveliswe yiXuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd., njengeqonga lealuminium, ingxubevange yealuminiyamu exhoma ibhaskiti, ileli yealuminium alloy, ialuminium alloy guardrail, ialuminiyam inyathelo le-alloy, njl. iimveliso zeAlloy. Izatifikethi zenkqubo yolawulo ezahlukeneyo ukuqinisekisa umgangatho; I-ISO9001: isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho ka-2015, i-ISO45001: Inkqubo yokulawulwa kwempilo yokhuseleko kunye nokuqinisekiswa kwenkqubo yokhuseleko, i-ISO14001: isiqinisekiso senkqubo yolawulo lokusingqongileyo ngo-2015, isatifikethi semodeli yelungelo lomenzi, isatifikethi somzi-mveliso weSGS, njl.
Iinkqubo zeXuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. kwaye zivelisa iimoto zombane, iinxalenye zemoto, iibhokisi zezixhobo zeelori, njl njl. Amalungu ealuminiyam alloy abonelelwa yinkampani kubathengi baye badunyiswa ngamxhelo mnye; i-R & D yenkampani kunye nabaqulunqi banamava eprojekthi etyebileyo kunye nolwazi lobuchule ukubonelela abathengi ngezisombululo ezingcono zoyilo.
I-Xuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. ivelisa iibhokisi zomoya kunye neenqwelo zomoya ezifunyenwe kakuhle ngabathengi. Abasebenzi bemveliso banamava omsebenzi otyebileyo, uyilo oluhle kunye nembonakalo entle, i-welding ephucukileyo kunye neenkqubo zebandla, kwaye zivelisa imveliso ekumgangatho ophezulu wealuminium kubathengi.
Ubungqingqwa obuphantsi beAluminiyam, amandla aphezulu, ukuqina okuphezulu kunye nokumelana nokwenza ukuba iinqanawa zealuminium zibe ngama-20% zikhaphukhaphu kuneenqanawa ezakhiwe ngentsimbi okanye ezinye izinto zealloy. Oku kunokunciphisa ubunzima beenqanawa kunye nokusetyenziswa kwamandla. Imveliso yeXuzhou Caixin Aluminium Co, Ltd. ivelisa kwaye ithengise iipleyiti zensimbi yealuminium, iiprofayili zealuminium ingxubevange kunye neenxalenye zealuminium zeenqanawa. Abathengi abatsha nabadala bamkelekile ukuba babonisane kwaye ba-odole.
Icandelo lamandla omoya
I-aluminium ingxubevange yolwakhiwo iindawo ziye zasetyenziswa ngokubanzi kumacandelo ahlukeneyo ngenxa yezinto ezinje ngamandla oomatshini kunye nobunzima bokukhanya; Xuzhou Caixin Aluminium Products Co., Ltd. uvelisa iindawo aluminium ingxubevange kushishino amandla omoya, nto leyo iphumelele indumiso ngamxhelo mnye evela kubathengi. I-R & D yenkampani kunye nabaqulunqi banobutyebi bamava eProjekthi kunye nolwazi lubonelela abathengi ngezisombululo ezingcono zoyilo.
Namhlanje, xa imiba efana nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo kunye nokutya kuya kusiba ngokubalaseleyo, kukho imeko ebonakalayo yokutshintsha iipelethi zomthi, iipellethi zeplastikhi kunye neepellets zentsimbi kunye nealuminium pallets kumabala okutya, ezonyango, ezococeko kunye nemichiza. I-Xuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. ibiphanda kwaye iphuhlisa ialuminiyam iminyaka emininzi. Amava obuchwephesha beepelethi zengxubevange, i-ISO9001: isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho ka-2015, i-ISO45001: 2018 isatifikethi senkqubo yolawulo lwezempilo kunye nokhuseleko, i-ISO14001: isiqinisekiso senkqubo yolawulo lokusingqongileyo ngo-2015, isatifikethi semodeli yelungelo lomenzi, isatifikethi somzi-mveliso we-SGS, njl.
Ibhokisi yealuminium yengqele ebandayo ngokuzimeleyo iphuhliswe yiXuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. yenziwe ngeepleyiti zealuminium kunye neeprofayili zealuminium. Inezinto ezilungileyo zobomi benkonzo ende, isiphumo esihle sokudlulisa ubushushu, kunye nesantya sokudiliza ngokukhawuleza. Ivunyiwe ngamashishini amakhulu efriji yasekhaya nakwamanye amazwe. Ifumene igama elihle. Le mveliso isetyenziswa ngokubanzi kwimizi-mveliso yokulungisa engumkhenkce njengeemveliso zasemanzini, ukutya kwaselwandle, iimveliso zenyama, ezolimo kunye neemveliso ezisecaleni, kunye nokutya okukhawulezileyo.
I-Xuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. ibonelela abathengi ngeeprofayili zealuminium kunye nealuminium alloy iindawo ezenziweyo eziye zanconywa rhoqo ngabathengi. Abasebenzi bezobuchwephesha abanamava kuphela eprojekthi kunye nolwazi olucwangcisiweyo, kwaye badibanisa izixhobo ezincedisayo zekhompyuter ukumisela isisombululo esifanelekileyo kwiimfuno ezahlukeneyo zabasebenzisi, kwaye baqonde ukudityaniswa komgangatho noqoqosho.
Indawo yokutyala ingxubevange yealuminiyam yazisa ngeseti epheleleyo yetekhnoloji yaseYurophu. Ukujonga ukusetyenziswa kwale mveliso, inkampani yethu yenze uphuculo olukhulu kunye nezinto ezintsha kubuchwephesha bokuqala. Yonke indlu yamakhowa yenziwe ngeeprofayili zealuminium alloy, ehlangabezana nemigangatho yolawulo lwemveliso oluzenzekelayo kwaye ifikelele kwinqanaba lehlabathi. I-ISO9001: isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho ka-2015, i-ISO45001: isiqinisekiso senkqubo yolawulo lwempilo yokhuseleko kunye nokukhuseleka, i-ISO14001: isiqinisekiso senkqubo yolawulo lokusingqongileyo, isatifikethi semodeli yelungelo lomenzi, isatifikethi somzi mveliso weSGS, njl.
Abasebenzi bobuchwephesha beXuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. abanamava kuphela eprojekthi kunye nolwazi lwenkqubo, kwaye badibanisa izixhobo ezincedisayo zekhompyuter ukumisela isisombululo esifanelekileyo kwiimfuno ezahlukeneyo zabasebenzisi ukufezekisa indibaniselwano yomgangatho kunye noqoqosho. Inkampani ineziqinisekiso ezahlukeneyo zolawulo lokuqinisekisa umgangatho; I-ISO9001: isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho ka-2015, i-ISO45001: Inkqubo yokulawulwa kwempilo yokhuseleko kunye nokuqinisekiswa kwenkqubo yokhuseleko, i-ISO14001: isiqinisekiso senkqubo yolawulo lokusingqongileyo ngo-2015, isatifikethi semodeli yelungelo lomenzi, isatifikethi somzi-mveliso weSGS, njl.